Sounders waxay ka adkaatay Toronto si ay ugu guuleysato 2e MLS Cup - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS The Sounders waxay ka adkaatay Toronto si ay ugu guuleysato 2e MLS Cup
Sounders waxay ka adkaatay Toronto si ay ugu guuleysato 2e MLS Cup
Kooxda Seattle Sounders waxay guul cajiib ah ka gaartay 3-1 oo ay kaga guuleysteen naadiga FC Toronto waxayna ku guuleysteen koobkoodii labaad ee MLS ee ku yaal CenturyLink Field galabnimadii Axadda.
Waxay ahayd markii saddexaad ee afarta sano gudahood ay labada koox ku kulmaan bartamaha MLS, Seattle waxay ku guuleysatay Koobkii 2016 halka Toronto ay ku guuleysatay garoonkeeda 2017.
Magaalada Toronto waxay ahayd tii ugu fiicneyd labada koox qeybtii hore ee ciyaarta oo caajis ahayd, laakiin ma aysan helin wax muujinaya, halka Seattle lumisay fursad kaliya ka faa’iideysatay wax yar ka hor nus-saac ilaa Raul Ruidiaz si naxariis darro ah u jiidaysa Stefan Frei .
Kooxda martida loo yahay ayaa hoggaanka u qabta wax yar ka hor wakhtiga Sawirka Kelvin Leerdam dhinaca midig ee aagga rigoorada waxay qaadatay qaab muuqaal laba jibaar leh oo bidix Quentin Westberg iyada oo aan wax fursad ah lagu helin Toronto.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee ay Seattle awood u yeelato inay gool ku dhaliso magaalada Toronto daqiiqadihii 267 ee ciyaarta oo u dhexeeyay labada koox koobka MLS. [1 9659002] Greg Vanney Dhexgalay Jozy Altidore raadinaayey isle'eg, laakiin waxay ahayd beddelka Seattle Victor Rodriguez oo garaacay halkii, ka soo kabsanaya baas fiican Nicolas Lodeiro midigtiisa bidixna hoos ugu tuura Westberg si loo laban laabto hogaanka Sounders.
Ruidiaz ayaa seddexleey ku daray kooxda Brian Schmetzer ka dib markii uu garaacay kubaddiisa isla markaana uu ku foorarsaday agagaarka Westberg ka hor inta uusan Altidore gool dhalin. Yoolka Toronto ee himilada qalbi qaboojinta.
Dadweynaha ku dhawaad ​​daawadayaasha 70 000 waxay matalaan ka qeyb galka ugu weyn waqti kasta oo aan laheyn riwaayad taariikhda CenturyLink Field, oo martigelisa Seattle Seahawks ee NFL.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/seattle-sounders-fc/story/3983791/seattle-sounders-knock-off-toronto-for-second-mls-cup-win-in-four-years
90 on 90: Seattle Sounders vs. Toronto FC
Juventus v AC Milan - Warbixinta kulamada kubada cagta - 10 November 2019 - ESPN